Prateek Daily: स्वान्त सुखाय:
Showing posts with label स्वान्त सुखाय:. Show all posts
कोरोनाकालमा सर्जकको चिन्ता र चासो
on 5:20:00 PM0Comment
सर्जकहरूको जहिले पनि चिन्ता हुने गर्दथ्यो, फुर्सद भएन। फुर्सदको अभावले केही कुरा लेख्न पाइएन, केही कुरा पढ्न पाइएन। समय नपाएर वास्तवमा चाहेजस्तो सिर्जना हुन सकेको छैन। पत्रिकाले वा फलानो विशिष्ट व्यक्तिले वा विशिष्ट ठाउँबाट रचनाको माग आएपछि तोकिएको समयको अन्तिममा बल्लतल्ल मिलाएर यस्सो एउटा पठाउन भ्याएको थिएँ। आदि आदि।
सधैं कामको मारामार र चापाचापमा अध्ययन र सिर्जनाको लागि समय नै नपाइने गुनासो अलिखित वा लिखित दुवै माध्यमबाट अभिव्यक्त भइरहन्थे। अलिखित माध्यमबाट अझ बढी आउँथ्यो।
आफूले पढ्न चाहेर पनि पढ्न नपाएको कृति फलानो हो, तपाईंले भ्याउनुभयो भने अवश्य पढ्नुहोला। मैले पढेका सबै कृतिमध्ये फलानो सर्वोत्कृष्ट ठानेको छु, एकचोटि अवश्य पढ्नुहोला भनेर सिफारिशहरू भइरहन्थे। तर समय जहिले पनि अपुग हुने गर्दथ्यो।
समय अपुग हुनु चाहिं व्यस्तताको परिचायक हो। सार्थक व्यस्तताले सर्जकलाई निरन्तर ऊर्जा दिइरहन्छ। त्यहीं ऊर्जाबाट सिर्जनकर्मको परिचय बन्दछ। सामान्य दिनचर्याको रचना यसै कारण सामान्य हुँदाहुँदै पनि विशिष्ट हुन्छन् र कम समयमा आफ्नो मस्तिष्कलाई अत्यधिक बढी उपयोग गर्ने अवसर हुन्छ तथा थोरै समयमा सिर्जनालाई दिइने समय अझ बढी मूल्यवान् बनाउन सकिन्छ। हो, समयको मूल्य समयले नै बुझेको हुन्छ।
सम्भवतः समयको यो उल्टो गति हो। मानवजीवनको गति असामान्य बगेको छ। अहिले एक किसिमले संसारले नै भनिरहेको छ कि घरमा नै बस। घरमा बस्नलाई फुर्सद मिलाएको छ, समयले। समयको उल्टो नदी बगेको बेला फुर्सद त छ तर फुर्सदको सिर्जनात्मक उपयोगको मनोविज्ञान बन्न सम्भव भएको अवस्था भने सबै सर्जकमा एकैनासको छैन। दिनदिनै आइरहेका समाचारहरूले मनोविज्ञानलाई नराम्ररी प्रभावित पारेको छ। पहिले कामले शरीरलाई फुर्सद दिंदैनथ्यो र अहिले शरीरलाई फुर्सद भएर पनि सिर्जनकर्ममा खासै उपयोग हुन सकेको छैन। धेरै सर्जकहरूको मनोविज्ञान सामान्यावस्थाको जस्तो सामान्य छैन।
पहिले घरपरिवारमा समय दिन सकिएन भन्ने गुनासो पनि सर्जकहरूले धेरै सुन्नुपर्दथ्यो । कार्यालय खुल्ने दिन कार्यालयमा र हप्तामा एक दिन बिदा हुँदा चाहिं कतै कार्यक्रममा धाउनुपर्ने दैनिकीले गर्दा घरमा समय दिन नसकिने गरेको गुनासो सामान्य थियो । तर यो असामान्य समयमा खासै कामै गर्न नसकिने र घरैमा घरपरिवारलाई पर्याप्त समय दिन सकिने अवस्थाले पनि सामान्य बन्न दिएको छैन । हो, सामान्य समयको मूल्य कति धेरै हुन्छ भन्ने कुरा यी दृष्टान्तहरूले बयान गरेका छन्।
सामान्य नागरिकहरूको चिन्ताजस्तै सर्जकको चिन्ता पनि रहेको छ। सर्जक भन्नेबित्तिकै अलिकति गम्भीर, अलिकति बढी संवेदनशील र अलिकति चिन्तनशील हुन्छन् भन्ने कुरा त सबैले पत्याएको सत्य हो। यो समय आफैमा गम्भीर भएकोले सर्जकहरूको संवेदनशील मनमा अझ बढी छोएको छ र चिन्तन पनि प्रभावित बन्न पुगेको छ।
कतिपय सर्जकले विभिन्न ग्रन्थहरू पढ्न पाएको सूची पनि सार्वजनिक गरेका छन्। पढिएका कृतिहरूको समीक्षा वा समालोचना लेखेको पनि कतिपय समालोचकहरूबाट सार्वजनिक भएको पाइएको छ। कतिपय सर्जकहरूले आफ्नो किताब तयार पारेको पनि बताएका छन् । नयाँ किताबको लेखन भएको, सम्पादन सकिएको, भूमिका लेखाइसकिएको, प्रेसमा पुगेको तथा लकडाउन खुल्नेबित्तिकै प्रकाशन हुने तयारीमा पुगेको जस्ता उत्साहजनक कुराहरू पनि आएका
छन् । यस दृष्टिले हेर्ने हो भने कोरोनाकालको धेरै उपयोग भएको पनि देखिएको छ।
सर्जकहरूले कविता, गीत, मुक्तक, गजल, लघुकथाजस्ता आयामका दृष्टिले साना रचनाहरू सामाजिक सञ्जालमा निरन्तर प्रकाशन गरिरहेका छन्। कोरोनाकालमा सामाजिक सञ्जालमा आएका रचनाहरूमा कोरोना भाइरस, मानवजीवनमाथि आएको सङ्कट, मानवजीवनमा परेको अन्य प्रभाव, यसले भविष्यमा खेल्न सक्ने भूमिका, कोरोनामाथि मानवको निश्चित विजयजस्ता कुराहरू अभिधा, लक्षणा वा व्यञ्जनामार्फत् आइरहेका छन्। एक किसिमले सिर्जनामा पनि कोरोनाको आधिपत्य जमेको युग हो। नजमोस् पनि कसरी ? साहित्यले समय बोलेको हुन्छ, समयको प्रतिनिधित्व गरेको हुन्छ, समयको अनुहारलाई इतिहासको लागि सुरक्षित बनाएको हुन्छ, समयलाई सिंढी बनाएर आगतमा टेकेको हुन्छ र कतिपय अवस्थामा समयको अनुहारलाई कुल्चेको हुन्छ। हो, समयको विभत्सतालाई पनि अहिले देख्न नसकिने होइन सिर्जनामा।
प्रकृतिको सबैभन्दा सुन्दर सिर्जना नै मानिस हो र मानिसमाथि अहिले ग्रहणको अवस्था छ। कोरोनाकालले लाखभन्दा बढीलाई जीवनहीन तुल्याइसकेको छ। यसप्रति सर्जकहरू अत्यन्तै संवेदनशील छन्। सर्जकहरूको चिन्ताको विषय हो र संसारमा कोरोनामाथि कसरी विजय प्राप्त हुँदैछ भन्ने चासो पनि छ। कोरोनामाथि विजय प्राप्त गरेका वीरहरूको अनुहारमा भविष्यको सम्पूर्ण मानव विजयको कामना देख्दछन् सर्जकहरू। कोरोनाको पराजयको कथा अवश्य आउनेछ।
कतिपय सर्जकहरू कोरोनासित लड्दै पराजय पनि भोगेका छन्। कतिपयले कोरोनामाथि विजय प्राप्त गरेका छन्। कोरोनामाथि विजयको आत्मकथा पनि आउने आशा छ। यही आशाको आकाश फराकिलो बन्दै गएको छ तर कोरोनाग्रसितभन्दा सङ्क्रमित मानव अभैm पनि संसारमा कैयौं गुणाले बढी छ । यो निश्चित गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको छ वैज्ञानिक, राजनीतिज्ञ र साधारण मानिससँगै सर्जकहरूका निम्ति पनि। सिर्जनामात्रले कोरोनाबाट मुक्ति पाउने भए सबैभन्दा बढी सर्जकहरूले योगदान दिने थिए।
सामान्य जनजीवनको समयमा घरमा यत्तिकै समय बिताउनेहरूलाई जति छटपटी समय बिताउन सर्जकहरूलाई भएको छैन। समयलाई निरर्थक हुनै नदिने प्रयासमा रहने सर्जकहरूको महŒव अहिले समयलाई रमाइलो बनाउनेहरूले बुझिरहेका छन्। यस कारण घरमा बस्नेहरूले अहिले अलिकति कृतिको अध्ययन पनि गरेका छन्। सर्जकको कर्मलाई सार्थक बनाउने काम पनि गरेका छन्।
वर्तमानको साँघुरो धरातलबाट कोरोनाकालको अन्त्यपछिको सुखद बिहानीमा कृतिको प्रकाशन र पठनको संस्कृति अलिक विस्तार हुने आकलन पनि सर्जकहरूले गरेका छन्। इतिहासले कहिल्यै नभोगेको परम पीडादायी अवकाश अहिले आफैले भोग्दैछ, वर्तमान ।
यदि वर्तमानलाई भविष्यको ऐनाले हेर्ने प्रविधिको विकास भएको भए शायद समय आफै पनि लज्जित हुन्थ्यो होला। समयलाई लज्जित बनाउन सर्जकहरूको कर्म काम लाग्ने होला कि ?
वास्तवमा कोरोनाकालले काललाई पनि ग्रसित गरेको छ।
सर्जकहरू पनि सामान्य नागरिक नै भएकाले समयको प्रवाहमा हेलिएका छन् । हो, अन्य कर्मभन्दा सिर्जन र यससित सम्बन्धित कर्म घरमैं बसेर गर्न सकिने भएकाले महान् बेरोजगार समयमा पनि कतिपय सर्जकलाई समय पुगेको छैन। यस प्रकार कतिपयले अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् कि गम्भीर लेखनमा व्यस्त छु।
वर्तमानलाई कुल्चेर हामी नयाँ बिहानीमा प्रवेश गर्नेछौं। हरेक अँध्यारो रातपछि बिहानी आएकै छ। सर्जकहरू पनि सामान्य व्यस्तताको प्रतीक्षामा छन् । सम्भवतः सम्पूर्ण मानव समुदायले कोरोना कालरात्रिको शीघ्र अन्त्यको कामना गरिरहेको छ।
यो लामो छुटीमा बालबालिकालाई घरमा कसरी राख्ने !
अति आवश्यक कामबाहेक घरबाट ननिस्कन सरकारको सल्लाह सार्वजनिक भएकै दिन देशभरका विद्यालयहरू बन्द गर्ने निर्णय सार्वजनिक भएको छ । देशका करीब सम्पूर्ण शिक्षालय बन्द छन् । शिक्षालयहरू अप्रत्याशित बन्द भएका होइनन्। सरकारले चैत ५ गतेसम्म विद्यालय तहका सम्पूर्ण परीक्षा सम्पन्न गर्ने निर्देशन दिएको थियो र चैत ६ गतेदेखि हुने एसइई परीक्षासमेतलाई रोक्दै देशभरका क्याम्पस तथा विद्यालयहरू औपचारिकरूपमैं बन्द गर्ने निर्णय पनि आयो । देशमा भीडभाड हुने अन्य कामहरूमा पनि करीब रोक लगाइएको अवस्था छ । क्याम्पस पढिरहेका विद्यार्थीहरू तथा विद्यालय तहका बालबालिकाहरू घर फर्केका छन् र फर्किरहेका छन् । शहर बजारमा चहलपहल कम हुँदै गएको अवस्थामा बालबालिकाहरू गाउँतिर वा आआप्mनो घरतिर थन्किने अवस्था आइरहेको छ ।
एकजना महिला अभिभावकले एकजना शिक्षकसमक्ष आप्mनो दुःखेसो पोख्छिन्– कसरी एक महीनासम्म बच्चालाई घरमा राख्ने होला ? अवस्था यस्तो आइसकेको छ कि मामाघर पनि पठाउन सकिन्न र घरमा दिनभर राखिरहन निकै गा¥हो छ ।
वास्तवमा विद्यालयमा ६ घण्टाको लागि जाँदा अभिभावकहरूले सबै कुरामा विद्यालयले नै राम्रो गरिदेओस् भन्ने अपेक्षा राख्छन् । जाडो वा गर्मी तथा वर्षाको समयमा बिदा हुँदा प्रकृतिले पनि केही हदसम्म बालबालिकालाई सम्हालिराख्न सजिलो बनाउँछ । बालबालिकाहरूलाई काममा पनि लगाउन सकिन्छ तर अहिले त घरमा नै बस्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना भएको छ । घरमा बालबालिकालाई के गर्न लगाउने ? कसरी सम्हाल्ने होला ?
अन्य समयमा विद्यालयमा छुट्टी हुँदा बालबालिकालाई पनि कहाँ जाने र के गर्ने भन्ने योजना हुन्छ सानोतिनो भएपनि तर अहिलेको यो विशेष छुट्टी हो । यो विशेष छुट्टीमा त घरमा मात्र बस्नुपर्ने भनिएको छ। कहीं कतै जाने योजना नै छैन । यो छुट्टीको व्यवस्थापन अलिक जटिल छ ।
एकछिन घरमा बस्न पनि नसक्ने वा एकछिन घरमा बस्दा त बालबालिकाले सा¥है दुःख दिने किसिमका हुन्छन् वा कतिपय अभिभावक नै आप्mना बालबालिकाको उटपटाङ काम देखेर रिसाउन बाध्य भइरहेका हुन्छन् । यस किसिमका बालबालिकालाई कैयौं दिनसम्म घरमा कसरी राख्ने होला ?
अरू छुट्टी र अहिलेको छुट्टीमा के फरक रहेको छ भने अन्य छुट्टीको समयमा बालबालिकालाई घरमा अभिभावकले पढ्नलाई भनिरहेका हुन्छन् । अहिले त करीब सम्पूर्ण विद्यार्थीको परीक्षा नै सकिएको छ । परीक्षा सकिनुको अर्थ यो पनि हो कि बालबालिकालाई अहिले घरमा पढ्नलाई बाध्य पार्न अलिक सजिलो छैन। पढ्नलाई के भन्ने होला ? पढ्नुपर्ने किताबको परीक्षा त दिइसक्यो ? परीक्षा दिइसक्यो भने पढ्नलाई अहिले केही बाँकी छैन । जब पढ्नलाई घरमा केही बाँकी छैन भने बालबालिकाहरूले झन् उपद्रो गर्छन् ।
घरमा अभिभावकलाई नै पढ्ने बानी छैन । अभिभावकहरू नै पढ्दैनन् । अभिभावकहरू पढ्दैनन् भन्नुको तात्पर्य यो हो कि अभिभावकहरूमा साहित्यिक–सांस्कृतिक कृति तथा पत्रिकाहरू पढ्ने बानी छैन । सामान्य दैनिक अखबारहरू पनि अभिभावकले पढ्दैनन् । कुनै राम्रो कृति पढेर बालबालिकालाई सुनाऊँ भन्ने संस्कार नै छैन । अहिले परीक्षा सम्पन्न भइसकेपछि बालबालिकालाई कसरी बिग्रन नदिने वा सरकारले जसरी घरमा रहन भनेको छ, त्यसरी दिनभरि कसरी करीब तीन हप्ता राख्न सकिन्छ भन्ने चिन्ता लाग्नु अस्वाभाविक होइन।
हो, एकाध दिन होइन । अहिले तीन हप्तासम्म बालबालिकालाई घरमा सम्हाल्नु छ । सम्भव भएसम्म बालबालिकालाई बालसाहित्य पढ्न दिऊँ । पुस्तकपसलबाट असल पुस्तकहरू किनेर ल्याइदिन सकिन्छ कोसेलीको रूपमा । तर यतातिर अभिभावकहरूको ध्यान जान सक्दैन । अभिभावकहरूले साहित्यिक–सांस्कृतिक पुस्तकको अध्ययन–पठनलाई बेकारको समय खेर फाल्नु र यसमा आर्थिक लगानीलाई फाल्तु लगानी भनी ठान्छन् । साहित्य तथा संस्कृतिमा रुचि लिने अभिभावकले बालबालिकालाई सिर्जनात्मक काममा लगाउन सक्छन् । यहाँ सिर्जनात्मक कामको अर्थ चाहिं कविता लेख्न लगाउन, कथा लेख्न लगाउन, अन्य कृतिहरू पढ्न लगाएर त्यसका मुख्य कुराहरू भन्न लगाउन सक्छन् । घरमैं असल सिर्जनाको अभ्यास गराउने तथा आपूmहरूले सुधार गरिदिन सक्छन् ।
यदि बालबालिकाका अभिभावक नै सिर्जनात्मक क्षमताका छैनन्, पत्रपत्रिका वा साहित्यिक–सांस्कृतिक पुस्तक पत्रिकामा रुचि छैन भने बालबालिकालाई घरमा व्यवस्थापन गर्न अलिक अप्ठ्यारो नै हुन्छ । तर यदि एकाध दिन बालबालिकालाई घरमा राख्न सकियो भने घरको काममा नै व्यस्त र अभ्यस्त बनाउन सकिन्छ । घरलाई सफा गर्ने, घरलाई सकेसम्म सिंगार्ने, भाँडाकुँडा सफा गर्ने, खाना पकाउने, तरकारी काट्ने र पकाउने आदि काममा सहयोग लिन सकिन्छ, व्यस्त राख्न सकिन्छ वा सिकाउन सकिन्छ । घरछेउमा बारी भए बारीमा तरकारी रोप्न तयारी गर्ने वा तरकारी रोप्ने काम नै गर्न सकिन्छ । हैन यदि पक्की घर छ भने छतमा वा कौंसीमा गमला सजाउने, तरकारी लगाउने, पानी हाल्न लगाउनेजस्ता काममा अलिकति व्यस्त बनाउन सकिन्छ । घरमा बसेको बेला चित्र बनाउने, रङ्ग भर्ने, त्यसलाई अर्को दिनको चित्रसँग तुलना गर्ने गराउन सकिन्छ । यसैगरी, बालबालिकाको उमेर र रुचि अनुसारका कामहरू गराउन सकिन्छ । यदि घरमा टेलिभिजन छ भने दिनको कुनै एउटा कार्यक्रम उसको रुचि अनुसारको हेर्न दिने तथा सम्भव भएसम्म एक दिनमा एउटा फिल्म पनि सबैजना सँगै बसेर हेर्न सकिन्छ । यसैगरी, दिनमा एक घण्टा समाचार पनि हेर्नुपर्दछ तथा हेरेको समाचारका मुख्य कुराहरू के के हुन् भनेर टिप्न लगाउनुपर्दछ । सकेसम्म समाचार हेरेर टिपेको कुरालाई मिलाएर लेखिदिए पनि हुन्छ । गर्न लाउने हो र सिकाउन खोज्ने हो भने घरमैं अनेक कामहरू खोज्न सकिन्छ । घरभित्र बस्न एकाध दिन सा¥है गा¥हो हुन्छ तर यदि तालिका बनाएर काम गर्ने वा गराउने हो भने घरभित्र पनि समय कटाउन बालबालिकालाई खासै अप्ठ्यारो हुँदैन । बालबालिकालाई सम्हाल्ने अभिभावकलाई पनि केही हदसम्म सजिलो हुन पुग्छ ।
यदि अभिभावक पनि घरमा छन् भने सबैभन्दा सजिलो काम भनेको पत्रिका पढ्न लगाउने र पत्रिकामा जस्तै समाचार र लेखहरू लेख्न लगाउने हो । पत्रिकामा विभिन्न किसिमका लेखरचनाहरू पनि प्रकाशित हुन्छन् तर त्यतिसम्मको लेखरचना बालबालिकाले लेख्न सक्दैनन् । गर्नु के पर्छ भने घरकै विभिन्न किसिमका सामानको उपयोगिता र महŒवको विषयमा लेख लेख्न लगाउने ? घर नै किन चाहिन्छ ? यसै विषयमा पाँच सय शब्दमा लेख्न लगाउने । सम्भव भएसम्म घरभित्रका अन्य विषयमा लेख्न लगाउन सकिन्छ। यसैगरी, आप्mनो गाउँको बारेमा, आप्mनो वंश र जातको बारेमा, खेतीपाती, बालीनाली, विभिन्न पेशा, भविष्यको चाहना, गाउँका देवीदेवताहरूको बारेमा, अन्य ऐतिहासिक वा सामाजिक, सांस्कृतिक विषयवस्तुको बारेमा सोधीखोजी लेख्न लगाउन सकिन्छ । आपूmहरूले पनि सकेको सहयोग गरिदिनुपर्छ । हरेक दिन लेख्न लगाउने हो भने उसमा लेखनकलाको विकासमा सहयोग पुग्दछ । लेखेको लेखलाई राम्ररी हेरिदिनुपर्छ, सुझाव पनि दिनुपर्छ, राम्रो भएमा प्रशंसा पनि गर्नुपर्छ । घरमैं पुरस्कृत पनि गर्दा हुन्छ । आपैंmलाई घतलाग्दो लागेमा कुनै पत्रिकामा छपाइदिने प्रयास पनि गरिदिनुपर्छ ।
अहिले बालबालिकाहरू घरमा नै बसेका छन् । स्थानीय पत्रिकाहरूले केही अभिभावकहरूलाई हरेक दिन सम्पर्क गरेर कम्तीमा एक पृष्ठ बालबालिकाका कविता, गीत, मुक्तक, चुटकिला, लेख, मन्तव्य, भविष्यका चाहनालगायतका विषयवस्तुलाई दिने योजना पनि बनाउनुपर्छ ताकि सिर्जनात्मक क्षमता भएका बालबालिकालाई एकातिर समय कटाउन सजिलो हुन्छ भने अर्कोतिर पत्रिकाले घरमा बसेका बालबालिकालाई सम्मान गरेको देखिन्छ किनभने यो विशेष अवस्था हो ।
सकेसम्म बालबालिकालाई घरबाटै निस्किन नदिऊँ । अभिभावकहरू पनि घरबाट निस्कने प्रयास नगरौं । राज्यले दिएको निर्देशन पालन गरौं । विश्व अहिले कोरोनाको खतरनाक सङ्क्रमणबाट गुज्रिरहेको छ । विश्वको लागि यो अति नै सावधानीको विषय बनेको छ । हामीले घरमैं सावधानी अपनाउनुपरेको छ । कोरोनाको कहरबाट जोगिने सबैभन्दा सजिलो उपाय नै घरमा बस्नु हो । यस चरम सङ्कटको समयमा बालबालिकालाई पनि सुरक्षित राख्नु सचेत अभिभावकको कर्तव्य हो ।